Odessa - mid ka mid ah magaalada loo dalxiis tago ee ugu caansan ee Ukraine. Study in Ukraine
The City of Odessa waxaa badanaa loo yaqaan “The Pearl ee Badda Madow“. Odessa waa magaalo qurux badan oo ku saabsan xeebaha Badda Madow in uu haystaa meel gaar ah kuna sugan laabta Ruushka iyo Ukraine. Booqashada Odessa waa inuu noqon doono ka duwan booqasho uu ku magaalo kasta oo kale oo. Marka la barbardhigo magaalooyinka kale ee Midowgii Soofiyeeti ee hore, Odessa waa hodan ku dhaqanka reer galbeedka Yurub. Odessa loo yaqaan dunida oo dhan ay tahay iyo dhaqanka oo uu leeyahay, waxa loo arkaa in ay, guriga opera labaad ee ugu quruxda badan oo muhiim ah in dunida.
Tirada dadka of Odessa ku saabsan yahay 1.1 million. Waa magaalo magalo la 150,000 dalxiisayaasha sanad walba ka adduunka oo dhan. Xagaaga, ay ku nastaan ​​oo ay la socdaan xeebaha bacaadka ah ee xeebaha Odessa iyo kulmaan this magaalada waari dhallinyarada. xeebaha The ogolaan dalxiisayaasha si ay u dareemaan sida ay ku jiraan Mediterranean. All of xeebaha of Odessa damacsan yahay la xeebaha caanka ah. In xagaaga waxay ka dhergaan gabdhaha quruxda badan, music, iyo martida sampling cunto dhadhan fiican. Mid ka mid ah xeebaha ugu caansan waa Arcadia Beach, oo waxa uu ku yaalaa ku saabsan 10 daqiiqo ka hoose.
Socodka in Odessa aad ka saamayn Talyaani classical in kaxeynayo guri xilligii Soviet arki kartaa taariikhda. On Deribasovskaya Street – wadada dhexe – waxaa jira noocyo kala duwan oo makhaayadaha, tiyaatarada, riwaayado iyo wareeg ka mid ah dadka. Dekedda of Odessa ayaa doonniyo waxay ka adduunka oo dhan uu yimid maalin kasta
Odessa leeyahay 1185 jidadka, 62001 dhismayaasha, 24 hotels, 34 goobaha waxbarashada, 88 Xarumaha daryeelka caafimaadka, 20 matxafyada. Gaadiidka Dadweynaha ee magaalada Odessa ka mid ah 21 wadooyinka taraamka, 15 basas gaariga, 47 basas iyo 35 marinnada baska.
Odessa waa magaalada 3aad ee ugu weyn Ukraine, magaalada ugu muhiimsan ee ganacsiga iyo magaalada ugu caansan 2aad dalxiiska ee Ukraine.It waa magaalada ugu wayn oo ay la socdaan dhan Badda Madow. Sannado badan ka hor, Odessa mar ahaa, ka dib markii Moscow iyo St. Petersburg, magaalada 3-dii taasoo keentay ganacsiga ee jirka Russia. Odessa waa ugu dekedda muhiimka ah ee Ukraine. Iyada oo ay dekedda u qurux badan oo ku saabsan Badda Madow, Odessa uu noqday Ukraine ee koonfurta suuqa kala Yurub oo xarun dhaqan oo muhiim ah.
Waxa intaa dheer in muhiimadda ay leedahay deked ah, warshadaha ee magaalada waxaa ka mid ah dhismaha markab, saliid turxaan, kiimikada, shaqada biraha cuntada- iyo raashinka. Odessa sidoo kale waa guriga saldhigga a Yukreeniyaan badda iyo maraakiibta kalluumaysiga badan.
Odessa waxaa ku taal buuraha saf Cafiyi deked yar. cimiladu waa mid fudud oo qalalan leh heerkulka celcelis ahaan bishii January ee 29 F iyo 73 F ee July. celceliska Odessa kaliya 35 cm (14 in) roobabka sannad kasta. Odessa ayaa jiga badan daweynta. Modern Odessa waa dib u dhiska magaalada keligeed, iyo magaalada hoose waxaa si tartiib tartiib ah loo kobciyey.
Odessa u muuqataa sidii magaalo ku taalla Mediterranean, iyadoo si aad saamayn ku Hababka naqshadda Faransiis iyo Talyaani. Odessa ayaa had iyo jeer lahaa ruux ka mid ah xorriyadda, malaha cilmi by awooddiisa ah inuu aqbalo dad faro badan oo kala duwan. magaalada waxaa si joogto ah marti bandhigaa, symposia, iyo shirarka. Waa goobta of qunsuliyadaha iyo ergooyinka ganacsi ee dalal badan oo bulshooyinka badan sarrifka dhaqanka firfircoon magaalada.
Magaaladu waxay leedahay dabeecad badan oo maxali ah ka magaalada kale ee Ukraine. Dadka of Odessa yihiin kuwo aad caan ku yihiin waxaa weeye fiiqan iyo awoodaha ganacsiga canny. Dalxiisayaasha waxaa soo jiitay by kaguuraya muuqaal dabiici ah Odessa ee, the 200 tallaabooyinka jaranjarada Potyomkin ee, tareenka badda, xeebaha bacaadka ah oo qurux badan oo ay la socdaan Badda Madow, dukaamada, maqaayado, Qaab dhismeedka cusub badan, iyo naqshadaha aan caadi ahayn classic of jir ah Odessa. design ee jaranjarada Potyomkin ayaa xoogaa abuuraa of khayaal ah indhaha samaynta tallaabooyinka u muuqdaan kuwo ka weyn ay size dhabta ah. The duulimaad sare waa 44.22 cagaha (13.4 mitir) ballaaran halka duulimaad hoose waa 71.28 cagaha (21.6 mitir). Jaranjarada’ magaca waxaa laga qaaday markab dagaal ka Potyomkin oo ahaa in la borogoraam filimka caanka ah ee magaca in ay soo saare Ruushka Sergei Eizenstein.